ကျန်ဒမာရေး – Myitter
ဆားဝက်ခြံတွေကို တစ်ညတည်းနဲ့ အပြုတ်ဖြုတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၂) မျိုး ဆားဝက်ခြံတွေဟာ မျက်နှာပေါ်က အမြင်ကပ်စရာအကောင်းဆုံး အရာတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ ဆားဝက်ခြံတွေကို တစ်ညတည်းနဲ့ အပြုတ်ဖြုတ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို lifehow ကနေ အခုလို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ (၁) ပျားရည်နဲ့သကြား ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ အဆီပြန်တတ်တဲ့ သူတွေနဲ့ အထူးသင်တေ့ာ်တဲ့ […]
ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်ကို ဂရုစိုက် ဖတ်ဖူးပါသလား? တချို့ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား? လူအများစု ဆေးတွေကို ခြမ်းပြီး ချိုးပြီး သောက်တာမျိုး ရှိဖူးမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်တဲ့အခါမှာလဲ […]
အသံတိတ် လူသတ်သမား .. ကိုယ်တွေ့လေးမို့ ပြောပြအုန်းမယ်
အသံတိတ် လူသတ်သမား) ကိုယ်တွေ့လေးမို့ ပြောပြအုန်းမယ် အားကစားလုပ်တော့ ငှက်ပျော ဖီးကြမ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဝယ်လာတယ် ဝယ်တဲ့နေ့ဝင်းနေတော့ ၂လုံးစားတယ် နည်းနည်း ရင်ပူတာခံစားရတယ် ငှက်ပျောသီးကြောင့်လို့ထင်မထားဘူး ညအိပ်ယာဝင် တစ်လုံးစားတော့ အတော် သိသာလာတယ် တစ်ညလုံး ရင်တွေပူ မနက်လည်း တစ်နေကုန် […]
သွား ကျန်းမာရေး အတွက် ဂရုစိုက်ရမည့် နည်းလမ်းကောင်းမျာ့း
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် “သွား” ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ ပီကေဝါးခြင်း တကယ်တော့ အချိုဓာတ်လျော့နည်းတဲ့ ပီကေ ကိုဝါးခြင်းဟာ သင့်သွားများ ယိုယွင်းမှု ကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပီကေ ဝါးခြင်းဟာ သွားကြို သွားကြား အတွင်းမှာရှိတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် သွားပိုးစားခြင်း ကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၂။ […]
သွားတွေဝါလို့ စိတ်မညစ်နဲ.တော့ဗျို့ … ဒီနည်းလေးတွေမိုက်တယ် 👍 စမ်းကြည့်လိုက်ပါ လှပကြည့်ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှာ အသေအချာပါ ..
March 4, 2018 Myit Ter 0
သွားတွေဝါလို့ စိတ်မညစ်နဲ.တော့ဗျို့ … ဒီနည်းလေးတွေမိုက်တယ်👍 စမ်းကြည့်လိုက်ပါလှပကြည့်ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှာ အသေအချာပါ .. အ၀ါရောင်ဖြစ်နေတဲ့ သွားတွေကို သဘာဝအတိုင်းဖြူလာအောင် ပြုလုပ်နည်း စမ်းကြည့်လိုက်ပါ လှပကြည့်ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ လူတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ပါဘဲ။ဒါပေမယ့်လည်း သွားတွေဖြူလာဖို့ အတွက် သွားဆရာဝန်တွေဆီသွားဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းမတက်နိုင် ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ဒါကြောင့် […]
ထမင်းချက်ဖို့ ဆန်ဆေးတဲ့အခါ သွန်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန်ဆေးရည်မှာ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်တွေ အကုန်ရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်မယ်ဆိုရင် ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ကျန်ရှိနေမယ့် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်မှာ […]
ဆီးမသွားရသေးခင် ဆီးအိမ်မှာအောင့်တောင့်တောင့်ခံစားရတာမျိုး ဆီးကျန်နေသလိုဖြစ်တာမျို့တို့ ရှိနေလျှင်
March 3, 2018 Myit Ter 0
ဆီးကျိတ် ယောင်လို့ ဆီးသွားရတာကျန်နေသလိုလို သွားပြီးတော့လည်းထပ်သွားချင်သလိုလိုညညခဏခဏထထ ဆီးသွားနေရတာတို့ဆီးမသွားရသေးခင် ဆီးအိမ်မှာအောင့်တောင့်တောင့်ခံစားရေတာတို့(အမျိုးသားများ)ငြုပ်သီးစားများသွားလို့ ဆီးပူဆီးချုပ်ဆီးအောင့်သူများအတွက်ခွေးတောက်ရွှက်(၇ -၁၀ )ကိုငှက်ပြောသီး(ဖီးကြမ်း)တစ်လုံးနှင့်ပြုတ်ပြီး သုံးလေးငါးရက်ဆက်စားလိုက်ရင် သက်သာပါပြီဗျာ။ ခွေးတောက်ရွှက်ပါးပါးလှီး ငှက်ပြောသီး ထိပ်ဖြတ်ဖင်ဖြတ်ပြီးမှပြုတ်နော် ပြုတ်ပြီးတော့မှပြုတ်ရည်၊အရွှက်၊ငှက်ပြောသီး သုံးခုလုံးစားပေါ့ဗျာ ချိုတိုတို ခါးသက်လေးမို့စားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ တစ်လတစ်ကြိမ်သို့နှစ်ကြိမ် ကိုယ့်အခြေအနေအရစားပေါ့ဗျာ ။ကျွန်တော်တော့ဆီးအိမ်ကအောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်လာရင် ညညထရတာစိပ်လာရင် စားလိုက်တာဘဲ။ ကိုယ်တွေ့မို့စေတနာနှင့်ပြောရတာပါ။ စာအရေးအသားမရှင်းလင်းရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ […]
ဒီအပင်​​လေးကို လူတိုင်းမြင်ဘူးမယ်​ထင်​ပါတယ်​ အ​လေ့ကျ​နေရာတိုင်းမှာ​ပေါက်​ပါတယ်​ ဗိစပ်​ပင်​လို့​ခေါ်ပါတယ်​ ။ သွားကိုက်​​နေတဲ့မိတ်​​ဆွေ အ​ခေါင်း​ပေါက်​ရှိ​နေရင်​ အဲ့ဒီအပင်​က အဖူးဝါ၀ါ​လေးအ​ခေါင်း​ပေါက်​ထဲ ထည့်​​ပေး​လိုက်​ခန​နေ သွားကိုက်​ တာ ဘယ်​​ရောက်​မှန်းမသိ​အောင်​​ပျောက်​သွားလိမ့်​မယ်​ ။ သွားကိုက်​လာတိုင်​ပြု လုပ်​​ပေးပါက အရှင်း​ပျောက်​ပါတယ်​ဗျာ။ သွားကိုက်​လွန်းလိုမျက်​ရည်​ကျ​နေသူ​တွေ ခနချင်းမှာပဲ​ပျောက်​ပါတယ်​ စမ်းကြည့်​ပါ။ ​ငွေလည်းမကုန်​ ​ဆေးလည်းမရှား ​ရောဂါ​ဝေဒနာများ​ပျောက်​ကင်းသက်​သာကြပါ​စေ။ ​ဒေသအလိုက်​ အပင်​အ​ခေါ်​ဝေါ်ကွဲပြားနိုင်​ပါတယ်​။ […]
သတိညတိုင်းညတိုင်း အိပ်​ချိန်​အတွက်​၁၁ နာရီထက်​ ​နောက်​မကျ​စေကြနဲ့​နော်​
သတိညတိုင်းညတိုင်း အိပ်​ချိန်​အတွက်​၁၁ နာရီထက်​ ​နောက်​မကျ​စေကြနဲ့​နော်​ ညအိပ်ယာထဲ အထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်​ ဖြစ်အောင် ဖတ့််သွားကြပါ ညနက်တဲ့အထိ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံး လျှင်​ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ (တကယ်ကြောက်စရာမို့ သတိထားသင့်ပါတယ်) ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ […]
အလွန်အမင်း အငတ်ခံကာ ၀ိတ်ချခြင်းနောက်ကွယ်က ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ Idolများ
Idol တွေဟာ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ Diet တွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (၆)မျိုးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ 1. သေချာတာတစ်ခုက အစားအစာတစ်ခုခုတော့ တကယ်ကိုမစားနိုင်တော့ဘူး။ SISTAR ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဘိုရာ နဲ့ ဆိုးယုတို့ဟာ သင်တန်းသူဘ၀တုန်းက အပြင်းအထန်ဝိတ်ချခြင်းတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် လုံးဝမစားနိုင်တော့တဲ့အစားအစာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ကြက်ရင်ပုံ ဒါမှမဟုတ် ငှက်ပျောသီးကို ငါလုံးဝ […]